INDODA ENESIGCAWU SOBUSO TATTOO ITHI IYANCEDA IARACHNOPHOBIA YAKHE - ARACHNOPHOBIA
Umboniso Wemihla Ngemihla
Indoda ifumana iTattoo eSigcawu esifihlakeleyo ebusweni bayo ukuze yoyise iArachnophobia yakhe
Njengabaninzi kuthi – nam ndibandakanyile – uEric Rico Ortiz uyoyika izigcawu. Ngethamsanqa, oneminyaka engama-24 ubudala waseFlorida (isothuso) wayila indlela entsha yokuzinyanzela ukuba oyise uloyiko oluqhelekileyo: ngokufumana umhlolokazi omkhulu omnyama ebhalwe esidleleni sakhe sasekunene.
Mamela, masingazicingeli malunga neetattoos zobuso. Ewe, zijongwe njengokuthathwa njengolutsha olusancancisayo okanye iisofa ezogqunywe ngeplastiki, kodwa u-Ortiz luvavanyo lwengqondo olubuthathaka.
Ustan ayisiyiyo le nto abonakala ngayo
Kungenxa yoko le nto ndiyifumene. Ukuthanda nje, undazise, ​​yile nto ndiyoyikayo, kodwa ndingoyiki. Uyayazi le ndiyithethayo? Wonke umntu ujonge ngathi yilahleko yesigcawu, kuba ukuba ujikeleza indlu yakho uyayazi into endiyithethayo, uyabona ezo zigcawu, uza kutsiba, uza kutsiba, ke ubeke enye ebusweni bam , Ndithi uyazi ntoni, ndiza kubona ukuba abantu bacinga ntoni.
U-Ortiz uthatha ukuba ukuba ngenye imini unokujonga ubuso bakhe esipilini ngaphandle kokutsiba, uya kuphiliswa kwaye alungele ukuba ne-terrarium egcwele i-tarantula. Andiqinisekanga ukuba ngenxa yokuba esiqhela umzobo emzimbeni wakhe, u-Ortiz akasayi kuphinda atsibe ukuba ngokwenene Umhlolokazi omnyama wakhasa esidleleni sakhe - kodwa ke, ndiyayithanda indlela awayeqiniseke ngayo.
Uvulindlela ongaqondakaliyo uyavuma ukuba abantu bahlala bemgweba ngokuba nomvambo wesigcawu owoyikekayo ebusweni bakhe, evuma, Abanye abantu bathi, 'Kutheni uyifumene? Awusoze ufumane umsebenzi. '
Ngombulelo, abanye bayayiqonda into yokuba uOrtiz wenza igalelo elibalulekileyo kwicandelo le unyango lokuziphatha . Abanye abantu bathi, ‘Kupholile, ndoda. I tattoo ebusweni, andinakuze ndiyifumane kodwa leyo yaphuma ipholile. '
Ukuba uyazibuza ukuba ngaba i-tattoo yobuso bakho inokuba ikwangaphandle okuphume kupholile, akunjalo.
U-Ortiz waqala ukuqokelela ingqalelo ngenkangeleko yakhe eyahlukileyo emva kwentatheli ye Iindaba ze-Daytona Beach-Ijenali ndambona enkundleni ejongene nokunqunyanyiswa kwelayisensi yokuqhuba kwaye yayikho konke, hee, kuya kufuneka ndifumane ispo kulo mfo une tattoo yesigcawu. (Mhlawumbi.)
Izinto ezimangalisayo zekhaka s04e06
U-Ortiz unephepha lomculo werap elide nelindilisekileyo, kodwa emngciphekweni woovulindlela abachasayo kwicandelo lezempilo yengqondo abathi bakwanazo neetattoo zobuso besigcawu, andizukuxelela into ayenzileyo.
Kwaye manenekazi, ndiyazi ukuba niyazibuza: ewe, uOrtiz akatshatanga. Intliziyo yakhe yaba ngumfel 'ukholo kwi-arachnophobic unobangela xa intombi yakhe yamshiya phezu kwe-inki enempikiswano. Wayenomsindo kum, u-Ortiz wacacisela iDaytona Beach News-Journal.
UOrtiz unawo umyalezo kubo bonke abo bathiyileyo ngokulingisa iwebhu kuye Facebook yesigcawu sayo:
UKUBA NDINGAQALA KWISKRIKI NDINGAYITSHINTSHI SHIT !!!! UR GAY DONT NDIGWELE !!!!!
Yup, ngokuqinisekileyo kubonakala ngathi uloyiko lwezigcawu yi-phobia le ngqondi ifunekayo ukuyenza kuqala.
(nge Iposi likaHuffington , umfanekiso nge Facebook )
Ngeli xesha kwikhonkco elinxulumene noko
RIP eyona tattoo imbi kakhulu kwihlabathi
Apha, yi-Steve Buscemi / Darth Vader hybrid eyoyikisayo
Izigcawu zisoyikeka naxa zidanisa
Umphathi Wasemelika Umphindezeli Wokuqala
izivakalisi unobumba u-a
buyela kwikatala kwikamva
ifoto yokuqala yomhlaba kwinyanga
Ilifa lokufa kombat yesiqendu se-10